Burburka Qoyska iyo Dhibaatooyinka ay ka Dbaxasho Bulshadu.
(Hadhwanaagnews) Saturday, February 09, 2019 10:36:05
Haddaba marka loo eego waayadan denbe waxa aad inoogu soo badanaayay furriinka iyo reeraha burburaaya, taas oo bulsho ahaan inagu keeni kara
Diinteenna islaamku waxa ay dhiirrigalisay guurka iyo dhismaha guri muslin ah oo naxariis iyo kal-gacal ku wada nool. Siddoo kale waxa ay shuruud adag oo gaashaan ah uga dhigtay in uu burburo qoys kaasi, maaddaama oo uu qoysku yahay halka ay ka unkanto bulshadu; oo haddii la rabo bulsho caafimaad qabta ay ka horrayso in la helo qoys caafimaad qaba, oo ka nabadgalay dhibaatooyin badan oo jiritaanka qoyska haggardaamo ku ah.
Marka aad u fiirsato dhaqankeenna furriinku waagii hore waxa uu ahaa mid aan la jeclayn. Haweenku gaar ahaan waxa ay aad uga carari jireen heblaayo waa la soo furay, taas oo ku khasbi jirtay in
la duudsiyo xuquuq badan oo ay haweenku raggooda ku la haayeen. laga yaabaa in mararka qaarkoodna loogu daro dilmo arxan darro ah, haddana aanay afkaa juuq ka odhan jirin haweenku; sababta oo ahayd iyaga oo naftoodda iyo qoysaska ay ka soo jeedaan ba kala cararaaya dhagxumo uu u soo jiido furriinkeeddu. Ma lihi boqolkiiba boqol waa uu saxnaa qaabkaa ay raggu ula dhaqmi jireen haweenkoodda, balse mararka qaarkood waxa uu ahaa mid xadgudub ku ah haweenka. Waxa istaahil ah in aynu nidhaahno waxa sabab u ahaa aqoonta diinta islaamka loo ahaa waagaa oo aad u yarayd, waayo diintana suubban ayaa si fiican inoo baraysa xuquuqda iyo waajibaadka ay isku leeyihiin lammaanaha nolosha wadaagayaa. Taasi waxa ay qeyb ka ahayd waxyabihii keenay in uu furriinku aad u yaraado oo uu noqdo mid faro ku tiris ah.
Haddaba marka loo eego waayadan denbe waxa aad inoogu soo badanaayay furriinka iyo reeraha burburaaya, taas oo bulsho ahaan inagu keeni kara in aynu noqonni bulsho aan u dhisnayn aqoon ahaan, akhlaaq ahaan iyo diin ahaanba. Waayo qoyska ayaa ah halka laggu soo barbaariyo ubadka oo lagu soo dhiso, se haddii ay bataan burburka qoysasku waxa hubaal ah in ubad badani dayacmaayo. Ma helayaan daryeel dhanmaystiran iyo cid ku gacan qabata siddii ay u noqon la haayeen kuwo la jaanqaadaya bushadoodda dhanka aqoonta iyo akhlaaqiyaadkaba; taasina waxa ay bulsho ahaan inoo horseedaysaa in ay inaga soo dhex baxaan dad badan oo nolosha ka dhacay.
Aan haddaba ku soo dhawaado in aan tilmaamo dhawr qodobo oo bulshadu ka dhaxli karto badashada furriinka.
1- Daraasado la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in carruurta ay waalidkooda kala tagaan in ay maskax ahaan ka hooseeyaan caruurta waalidkood ay wada jooggaan, dabeecad ahaanna ay ka qalafsan yihiin, naxariista iyo kalgalcalkuna ay ku yaryihiin oo ay noqdaana kuwo bulshada kula nool cunfi iyo naceybshiinyo.
2 - In ay carruur badani dayacmaan oo ay ku dhacdo hooyo la'aan iyo aabo la'aani.
3- Waxaa badata dhallinyarada isticmaalaysa maandooriyaasha kala duwan iyo kuwa ka dhacay nolosha.
4- Waxa sidoo kale bata carruurta darbijiifka ah. Innaga maanta marka aad u fiirsato waxaad arkaysaa in maalinba maalinta ka denbaysa ay soo badanayaan ubadka darbijiifka ahi.
5- In bulsho badan oo xigto iyo xigaal isku ahaa ay isku xumaadaan.
6- Xushmaddii iyo sharaftii haweenka oo dhulka gasha.
7- Faaxishada oo bulshada ku dhex faafta.
8- Xishoodkii iyo haybaddii haweenka oo iyana meesha ka baxda.
9- Amniga oo faraha ka baxa oo ay bataan tuugada iyo dhacu.
10-shaqo la'aanta oo badata, waayo kumannaan dhallinyaro aha baa nolosha ka dhacay oo aanay cidna waxba u dirsanayn,saamayn tabana waa ay ku yeelanaysaa dhaqaalaha waddanka
WQ.Garyaqaan Abdirahman Jama.